Ọhụrụ ọkụ na -enwu ọkụ atọ maka McCoy's Fire Pit Chips - Potatoes News
Ọkụ atọ na -enwu ọkụ ọhụrụ maka ibe ibe ọkụ McCoy
Nri na -atọ ụtọ nke isi nri n'elu ọkụ mepere emepe na ahụmịhe n'akụkụ ndị isi nri iji mepụta anwụrụ ọkụ, ihe ụtọ nke na -esite na usoro a nwayọ na nke siri ike, ha niile kpaliri ndị ọkachamara ibe ibe McCoy ka ha mepụta Ọkụ Ọhụrụ. ngwaahịa nso.
"N'iji ụdị 'ọkụ ọkụ atọ atọ na-atọ ụtọ iji nwalee ma dị na ngwugwu ma jide akpa, a na-esite n'ọkụ ọkụ McCoy ọhụrụ wee kpalie ọchịchọ gị!" dị ka ngosi webụsaịtị McCoy.
Peri-Peri na-enwu ọkụ na-egosipụta ekpomeekpo ọkụkọ na-ekpo ọkụ ma na-esi ísì ụtọ nke ejikọtara ya na ose a ghere eghe n'elu icheku ọkụ na-atụgharị na lime chara acha.
Flame Scorched BBQ Rib nwere ọmarịcha, ọgaranya, na-atọ ụtọ nke ukwuu South South nke ọgịrịga anụ ahụ na-esi ísì ụtọ na anwụrụ ọkụ. Ọhụrụ ose na caramelized ụtọ nke obere anwụrụ ọkụ.
Flari Smoked Chorizo ​​na -ebu paprika, chili, na ose na -acha ọbara ọbara na -esi ísì ụtọ yana soseji anụ ezi gwọrọ, gwụchara ya na sauteed na eghe eghe.
Tags: Ọkụ ỌkụNdị McCoy
Lamb Weston / Meijer nwere mmasị na nnukwu ụlọ ọrụ mgbawa Russia mbụ
Ndị na-eto eto nduku Turkey chere ọnụ ahịa nrụpụta na-arị elu ihu